Shiinaha Fudud hal khaanad qol jiif oo habeynka dhinaceeda ah # 0122 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Qaanad fudud oo hal qol jiif ah oo ku dhejisa qolalka habeenkii # 0122
Lambarka tusaalaha: Amac-0122
Cabir: 350mm * 500 * 580mm
Miiska sariirta dhinaceeda lagu keydiyo oo keliya
Dhammaan xulay alwaax adag oo bey'adeed oo tayo sare leh, xoog leh oo qaro weyn, xasiloon oo raagaya, badeecooyin dhab ah oo qiimo macquul ah leh, oo ay ka buuxaan qalab. Dusha sare ee golaha wasiirradu wuu ballaadhmay oo wuu adkaaday, waa siman yahay oo jilicsan yahay, waa fududahay in la nadiifiyo. Geedka cad wuxuu si toos ah ula dagaallamaa, cabsi la'aan baabtiisyada sannadaha. Iyadoo la raacayo heerka caalamiga ah ee "anti-dildilaaca iyo ka-soo-beddelidda", waxaan xulannaa geedkii caddaa ee laga keenay Waqooyiga Ameerika, ha ku darin wax guddi ah, ma aha kuwa cawdu ku dheehan tahay, oo waxaan diidnay inaan laminateynno. Kaliya samee alaabta guriga oo ku habboon dadka caadiga ah.
Kaydinta lakabyo badan oo adag oo alwaax ah
Meelaha wax lagu kaydiyo ee heerarka badan leh waa kuwo gaar loo leeyahay oo furan. Isku darka goob furan iyo khaanad xiran waxay xaqiijineysaa qaddarinta awood ballaaran waxayna sidoo kale buuxisaa baahiyaha kala duwan ee dadka kala duwan. Miiska sariirta oo dhan wuxuu qaataa qaabka jiifka ah ee gebi ahaanba iyo qalabka alwaaxa, taas oo aan kaliya hubinaynin wada noolaanshaha miraha qoryaha, laakiin sidoo kale waxay yareyneysaa dildilaaca illaa xad aad u weyn, taas oo ah tijaabo shaqo iyo qalab waqti badan qaadanaya.
Geed cad oo tayo sare leh oo laga xushay Waqooyiga Ameerika
Khaanadda kore ayaa la xiri karaa si loo dhigo qaar ka mid ah alaabta shaqsiyadeed, xusuus-qorka xusuus-qorka, dukumintiyada caddaynta, iwm. Qaybta furan ee dabaqa hoose waxay haysaa agabyada akhriska, taleefannada gacanta, IPAD, iwm ka hor intaadan seexan si looga hortago boodhka. Dusha sare ee ballaaran waxaa lagu dhejin karaa indhaha iyo waxyaabaha kale ee shaqsiyadeed.
Majiro wax iska caabin ah oo lagu jiidayo jeexitaanka tareenka adag
Xadiidka adag ee birta lagu riixo, riixida iyo jiidista aamusan, siman oo aan iska caabin lahayn, iska ilaali dhibaatada miridhku, waarayo Xakamaynta jeexitaanka alwaaxa adag waa mid fudud oo qurux badan, tiknoolajiyada jeexdin ee galka ku jirta waxay keydineysaa meel waxayna dareemaysaa raaxo Ballaca jeexdin wuxuu ku habboon yahay ballaca farta aadanaha, waana sahlan tahay in la furo oo la xiro.
Saaxiibtinimo iyo bini'aadanimo 45 darajo geeska golaha wasiirada
The geeska miiska arc-45 degree ayaa si isdabajoog ah loo safeeyey si looga dhigo mid wareegsan oo siman si looga hortago kuuskuus. Muujinta si kama 'ah, dib u yara fiirsasho yar, waxay noqon kartaa daqiiqadda lagu wado inaad kula kulanto. Looma baahna in si ula kac ah loo murugo, u laabo ujeedkii hore oo la fududeeyo kakanaanta.
Lugaha kabadhka geesinimada leh ee isku dhafan moodada iyo dabeecadda
Geesaha wareegsan ee armaajooyinka alwaaxa adag oo ay weheliso qalab naxaas ah ayaa ka dhigaya mid aad u qaabaysan oo xasilloon. Isku dhafka moodada iyo dabeecadda ayaa ka muuqda faahfaahinta joogtada ah. Waxay ka dhigan tahay dabiiciyan iyada oo aan wax laga beddelin, oo la hayo raadadka dabiiciga ah ee qoryaha dabiiciga ah, qaabku waa mid jilicsan oo cad, fudud oo dabiici ah.
Hore: Grooved xamili laba-sawir-sariirta dhinaceeda alwaax adag alwaax adag golaha wasiirada # 0121
Qoryaha adag ee saqafka sare iyo saxanka caagga ee cafe S ...
Casriga Minimalist White Oak Solid Wood Coffee T ...
Premium Dog House Sariir adag oo sariir ah oo loogu talagalay xayawaanka
Heller Animal Hutch oo leh Ramp Bakayle Hutch Butros ...